Welcoming Daw Aung San Suu Kyi | Just Another WordPress Blog
http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F7162880&secret_url=false VanSangVa-DASSK by vansangva
နှင်စကားပြောလိုသောကြံ့ဖွံ့။ # ကြံ့ဖွံ့ နှင့် စကား ပြောရန် အဆင်သင့် ရှိသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။
# စကားတော့ပြောကြပါ။ကြံ့ဖွံ့ကတော့ သူ့လမ်း ကိုသူ ဆက်လျေက် သွားမှာ ဖြစ်သည်။
# ကိုယ့်ဖက်ကလည်း ကိုယ့်လမ်းကိုယ် ဖေါ်နေရပါမယ်။
# တွေ့ဆုံးဆွေး နွေးရေး ဟူသည်မှာ ပြည်သူ အခြင်းခြင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေး နေကြဖို့ လည်းအရေး ကြီးပါသည်။
# တပ်မတော်သား ပြည်သူတွေ နဲ့ အရပ်သားပြည် သူတွေ ကြား မှာ တဦးခြင်း ဆွေးနွေးရေး တွေ အဆက်မပြတ်ရှိနေဖို့ လိုပါသည်။
# တပ်မတော်သားတွေကလည်း ပြည်သူတွေထဲ မှာ နေ့စဉ်ရှိနေပါသည်။ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေး ရန်အခွင့် အလမ်း များရှိနေပါသည်။
# ဆွေးနွေး ရန်အချက် အလက်များ ကို ဒီဘလောက် မှာ ရော တခြား ဘလောက်ပေါင်းပြောက်မြားစွာထဲမှာ ပါ ရှာဖွေဖတ်ရှု နိုင်ပါသည်။
# ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟောပြောချက်များ ကိုလည်း အတူတကွ တိုင်ပင်နိုင်၊ ဖလှယ် နိုင်ပါသည်။
# သန်း ပေါင်း မြောက်မြားစွာသောပြည်သူတို့ကြားမှာ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေး တွေ ကလည်း ဒီမိုကရေစီ အအုံ အဖွဲ့ ကြီးကို တည်ဆောက်ရာမှာ အုတ်တချပ် သဲ တမုတ် ရေတခွက် အဖြစ် ပေါင်းလိုက်နိုင်ရင် ကြီးမားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ ကို ပြည်သူတွေ ကိုယ် တိုင်ကလည်း ဖန်တီး နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါသည်။
Thank you so very much for this very timely message. We will promote this timely message by sending it to everyone we know.
Your message vividly made everyone aware of the military government’s track record and of how cunning they are. It was very intriguing to hear about the military government’s strategies, which they use to control Burma. They certainly lack any sense of humanity and sincerity. It’sareal wake up call, reminding people that they should not be overly caught up in happiness following Daw Aung San Suu Kyi’s release, as we do not know what to expect in the months to come. Who knows if they may strike when least expected. So, we hope that people are informed by listening to your message. We always admire your assiduous endeavours to shed light on true democracy for the people of Burma.